"Ary Daniela ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara-hanina avy tamin'ny hanin’ny mpanjaka na tamin’ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehiben'ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany" - Dan. 1:8.
Anisan' ireo tokony hosaintsainintsika tsara ny lesona aseho eto. Ny fanarahana tanteraka ny fitakian'ny Baiboly dia hitondra fitahiana ho an'ny vatana sy ny fanahintsika. Tsy ny fitiavana, ny fifaliana, na ny fiadanana ihany no vokatry ny Fanahy fa fahononan-tena ihany koa. Asaina mba tsy handoto ny tenantsika isika satria tempolin'ny Fanahy Masina izany.
Mba nanana zavatra tiana manokana toa antsika koa ireo lehilahy hebreo babo ireo. Na dia teo anivon'ny fakam-panahy izay nateraky ny hatsaran'ny lapan'i Babilona aza izy ireo dia nijoro ho mahatoky hatrany. Voahodidina fakam-panahy hanatanteraka ny sitrapon'ny tenany ny tanora ankehitriny. Lasa mora sady mandresy lahatra ireo karazana filan'ny nofo ary mahasarika tokoa, indrindra any amin'ireo tanan-dehibe. Ireo izay manda tsy handoto ny tenany tahaka an'i Daniela no hijinja ny valisoan'ny fahononan-tena. Noho ny fananany tanjaka ara-batana lehibe kokoa sy herin'ny faharetana nitombo hatrany hatrany, dia nanana tahiry izy ireo izay azony nampiasaina raha sanatria tojo hamehana.
Ireo fahazarana tsara ara-batana dia mampivelatra ny faharanitan-tsaina. Miankina amin'ny lalana tsy miova ny herin-tsaina, ny tanjaka ara-batana, ny halavan'ny andro iainana. Tsy hanakana ny vokatry ny tsy fanajan'ny olona ny Ialan'ny zavaboary ny Andriamanitry ny zavaboary. Tsy maintsy mahonon-tena amin'ny zavatra rehetra izay miezaka hifehy ny tenany. Niankina be dia be tamin'ny fahatsoran'ny sakafony sy ny fiainam-pivavahany ny fahazavan-tsaina, ny fijoroana ho mahatoky amin'ny safidy, ny tanjaka teo amin'ny fikatsaham-pahalalana ary ny fanoheran'i Daniela ny fahotana. (...)
Noraketina ao amin'ny pejin'ny Teny avy amin'ny Tsindrimandry ny tantaran'i Daniela sy ny namany mba hahasoa ny tanora mandritra ny taona mifandimby rehetra. Amin'ny alalan'ny firaketana an-tsoratra ny fahatokian'izy ireo tamin' ireny fitsipika mifehy ny fahononan-tena ireny no hiresahan' Andriamanitra amin'ny zatovolahy sy zatovovavy ankehitriny, ka hanasany azy ireo hanangona ny tara-pahazavana sarobidy rehetra nomeny momba ny fahononan-tena kristianina, ka hampifandrindrany tsara ny tenany amin'ny lalana ara-pahasalamana. YI, 9 Jo!. 1903.